Food & Beverage – ICT.com.mm
Sun Dried Sweet Plum 200g (50 PCs)K55,000
ROYAL - D Electrolyte BeverageK6,000
Malee Jelijoop Red Grape Coconut BitsK23,126
Maliban Wafers Cholocate (90gm)K15,400
Maliban Wafers Vanilla (90gm)K15,400
ROYAL - D Electrolyte Beverage
ချွေးထွက်များလို့ ရေဓာတ်ဆုံး၊ ရွိုင်ရယ်-ဒီ သာ အကောင်းဆုံး။ 12 x 400 ml PET plastic bottles ၄၀၀ မီလီလီတာ ရှိတဲ့ ဗူးတစ်ဗူးဖြစ်ပြီး၊ တစ်ကဒ်မှာ ၁၂ ဗူး ပါဝင်သည်။ ချွေးထွက်များတတ်သူတွေနဲ့ အားဖြည့်အချိုရည် Energy Drink နှစ်သက်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Royal-D အားဖြည့်အချိုရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးထွက်ခြင်းနဲ့အတူဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေနဲ့...
Win Win Baked Potato BBQ flavour
BBQ Flavored 36 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး ဘာဘီကျူးအနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ...
Vegetable Flavored 36 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး အသီးအရွက်ကရင်မ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ...
Sour Cream Flavored 36 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး ဒိန်ချဉ်ကရင်မ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀...
Tomato Flavored 36 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး ခရမ်းချဉ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ...
Five Diamond Shwe Bo Rice 48 kg
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဟာ ဆန်သားရှည်ပြီး ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ဖွာသွားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နူးညံ့တဲ့ အရသာကို ခံတွင်းထဲမှာ ခံစားချင်သူတွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ GMP, HACCP အစရှိသော ကျန်းမာရေးလက်မှတ်များရရှိထားသောကြောင့်မိတ်ဆွေတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ၂၄ ပြည်ထုပ် ၁ ထုပ် ပါ၀င်ပါသည်။ ဆန်ကောင်းဆန်သန့်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော မိတ်ဆွေတို့အတွက် စိန်ငါးပွင့် အဆင့်မြင့်ဆန်စက်ကြီးမှ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အရောအနှောကင်းသော ဆန်များကို...
Five Diamond Shwe Bo Rice 24 kg
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဟာ ဆန်သားရှည်ပြီး ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ဖွာသွားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နူးညံ့တဲ့ အရသာကို ခံတွင်းထဲမှာ ခံစားချင်သူတွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ GMP, HACCP အစရှိသော ကျန်းမာရေးလက်မှတ်များရရှိထားသောကြောင့်မိတ်ဆွေတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ၁၂ ပြည်ထုပ် ၁ ထုပ် ပါ၀င်ပါသည်။ ဆန်ကောင်းဆန်သန့်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော မိတ်ဆွေတို့အတွက် စိန်ငါးပွင့် အဆင့်မြင့်ဆန်စက်ကြီးမှ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အရောအနှောကင်းသော ဆန်များကို...
Five Diamond Shwe Bo Rice 12 kg (4 Pcs)
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဟာ ဆန်သားရှည်ပြီး ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ဖွာသွားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နူးညံ့တဲ့ အရသာကို ခံတွင်းထဲမှာ ခံစားချင်သူတွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ GMP, HACCP အစရှိသော ကျန်းမာရေးလက်မှတ်များရရှိထားသောကြောင့်မိတ်ဆွေတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ၆ ပြည်ထုပ် ၄ ထုပ် ပါ၀င်ပါသည်။ ဆန်ကောင်းဆန်သန့်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော မိတ်ဆွေတို့အတွက် စိန်ငါးပွင့် အဆင့်မြင့်ဆန်စက်ကြီးမှ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အရောအနှောကင်းသော ဆန်များကို...
Five Diamond Shwe Bo Rice2kg (12 Pcs)
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဟာ ဆန်သားရှည်ပြီး ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ဖွာသွားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နူးညံ့တဲ့ အရသာကို ခံတွင်းထဲမှာ ခံစားချင်သူတွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ GMP, HACCP အစရှိသော ကျန်းမာရေးလက်မှတ်များရရှိထားသောကြောင့်မိတ်ဆွေတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပြည်ထုပ် ၁၂ ထုပ် ပါ၀င်ပါသည်။ ဆန်ကောင်းဆန်သန့်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော မိတ်ဆွေတို့အတွက် စိန်ငါးပွင့် အဆင့်မြင့်ဆန်စက်ကြီးမှ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အရောအနှောကင်းသော ဆန်များကို စျေးနှုန်းချိုသာ...
Give Purify Drinking Water 18.9 Lit
Brand: Give Volume: 18.9 Liter Qty: 1
Kande Purify Water 1000 ml (6 Bottle Per5Crate)
We perfected the art of hydration. Dedicated hydrologists has concoctedawater composition using state of the art equipment. To ensure that each and every bottle of kande water will...